Buddy Media sy ny Cloud Salesforce Marketing | Martech Zone
Talata, Jolay 31, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha resaka marketing media sosialy, ny atiny ifanakalozana izay manintona ny eritreritry ny mpijery lasibatra no mpanova lalao. Buddy Media's Ny sehatry ny varotra sosialy dia manolotra maritrano azo antoka sy azo ovaina izay ahafahan'ny mpivarotra marika mamorona sy mitantana atiny toy izany.
Miaraka amin'ny Buddy Media ary Radian6, salesforce.com dia hanana rahona marketing matanjaka indrindra izay ahafahan'ny mpanjifa mihaino, mandray anjara, mahazo fahitana, mamoaka, manao dokambarotra ary mandrefy ny programa marketing ara-tsosialy. Farany, mino izahay fa ny Salesforce Marketing Cloud dia hanome hery ny mpivarotra hanatsotra ny fiainany amin'ny fanamafisana vahaolana maro ary hananganana seha-pihariana ara-tsosialy mitambatra izay mifamatotra tanteraka amin'ireo varotra rahona sy vokatra serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany. Michael Lazerow amin'ny Salesforce fahazoana Buddy Media.
Ireo fitaovana atolotra dia:
ProfileBuddy fitarihana mora misintona sy mandatsaka mba hamoronana atiny mifandraika manokana
ReachBuddy hametraka mora foana ny atiny manerana ny habaka sosialy
ConversationBuddy mamorona sy mamoaka bitsika na mamadika ny resaka mahazatra ho sioka
BuyBuddy mamorona, manara-maso, manatsara ary mandrefy ny doka amin'ny dokambarotra Facebook
ConversionBuddy izay mamela ny mpanjifa hizara atiny sy fampahalalana momba ny vokatra manerana ny habaky ny media sosialy.
Buddy Media dia mampanan-karena ireo fitaovana ireo amin'ny tabilao mavitrika sy mahery Analytics. Ireo dashboard, azo namboarina tamina tranomboky misy ny drag-and-drop widget, dia mamela ny fampitahana ireo mari-pamantarana marketing lehibe ary manome fifehezana ny fampielezan-kevitra sy ny hetsika.
The Analytics manangona angona avy amin'ny loharano isan-karazany mba hanomezana angon-drakitra feno sy azo ampiharina. Manome hevi-baovao toy ny fotoana tsara indrindra amin'ny tontolo andro hampifandraisana ireo mpankafy, ny tratran'ny varotra, ary ny fomba fanatontosana ny fitsabahana manokana mifandraika amin'ny tanjona.
Ny fanamarihana manokana dia fananana C-Laharana na Connections Rank, isa isa eo anelanelan'ny 0 sy 100, izay mari-pamantarana ny firotsahan'ny marika amin'ny tambajotra sosialy vis-à-vis indostria na mpifaninana mitsangana.
Ireo mpivarotra savvy dia afaka mampiasa ny maritrano Buddy media azo ovaina sy azo antoka nampanan-karena tamina hevi-baovao ho an'ny fahafaha-manao maro. Ankoatry ny fampiasana miharihary amin'ny fampidirana sy fitantanana ny atiny ara-tsosialy, ireo fitaovana ireo dia ahafahan'ny mpankafy na ny mpanaraka mihombo amin'ny sehatra eo an-toerana na manerantany, manomboka sy mitantana ny resaka manerana ny sehatry ny fiaraha-monina, mandrefy ny ROI, ary misy akony amin'ny fidirana an-tsokosoko samihafa.
Tsindrio eto raha hisoratra anarana amin'ny fampisehoana ny vokatra Buddy Media.
Tags: haino aman-jery sakaizaBuyBuddyConversationBuddyConversionBuddyProfileBuddyReachBuddy
Ny indostrian'ny serivisy amin'ny serivisy dia tsy maintsy ahitana ny lisitry ny Angie